အကောင်းမွန်ဆုံး Teamwork ကိုဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ? · MyWorld
အကောင်းမွန်ဆုံး Teamwork ကိုဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ?
28 Feb 00:00 by William Aung Ko
ဒီမေးခွန်းက လွယ်သလောက် အဖြေကတော့ ထင်သလောက်မလွယ်ကူလှပါဘူး။ သွေးသားတော်စပ်တဲ့မိသားစုတွေမှာတောင် Teamwork ကောင်းတစ်ခုရဖို့ရာမသေချာလှပါဘူး။​
လုပ်ငန်းခွင်မှာဆို အရောင်မျိုးစုံနဲ့ လူတွေစုဝေးပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက်လုပ်ကြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ Teamwork တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှသိမှတ်ခဲ့တာလေးတွေမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ Teamwork တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ ကနဦးအစပြုရမှာကတော့ တူညီတဲ့ပန်းတိုင်သတ်မှတ်မှုပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မတူညီမှတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ Teamwork ဆိုတာအလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါ။ နောက်ပြီး Team Members အချင်းချင်းနားလည်ပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပါပဲ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဖြစ်တည််မှုတွေမတူညီတဲ့အတွက် အချင်းချင်းနားလည်ပေးမှသာ တူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကို အတူတူတက်လှမ်းလို့ရနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ကိုယ်နဲ့အသွင်တူညီတဲ့လူတွေကိုပဲ လက်ခံနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာကလညး် ကိုယ်အဆင်မပြေတာတွေကိုမမျိုသိပ်ထားဘဲ အချင်းချင်း ဖွင့်ဟညှိနှိုင်းဖို့ကိုဆိုလိုပါတယ်၊၊ Team Members အချင်းချင်းတွေလည်းသာတူညီမျှယှဉ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြု Appreciate လုပ်ပေးခြင်း ဆိုတာတွေကလည်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ နောက် Team Members တွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်ဆီတိုက်ရိုက်မလာသောသတင်းများကို အထူူးတလည်ဂရုမစိုက်ဖို့ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလညး် အလုပ်ကိစ္စကလွဲပြီး Personal တွေကို အလေးမထားဖို့လိုပါမယ်။ မဖိတ်ခေါ်ဘဲရောက်လာတတ်တဲ့ အခွင့်အလမး်ကောင်းတွေကိုလည်း မျှဝေချင်တဲ့စိတ်ထားမျိုး Team Members တိုင်း ထားရှိနိုင်ရပါမယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တညး် အောင်မြင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုထက်မပိုပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ Teamwork တစ်ခုနဲ့တော့ အလှမ်းဝေးနေအုံးမှာပါ။
Teamwork ကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရမှာ အဓိကကျတဲ့ဦးဆောင်မှုသည်လည်းမပါမဖြစ်ပါ။ Team Leader တစ်ဦးရဲ့လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီပြောရရင် Team နဲ့အမြဲမပျက်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမျိုးဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုမျိုးဖြစ်စေ Meeting တွေလုပ်နိုင်ရပါမယ်။ ယခုလို IT ခေတ်ကြီးမှာ သင့်ရဲ့ Team Member တစ်ယောက် ရေခြားမြေခြားရောက်နေရင်တောင် တစ်ပတ်တစ်ရက်အနည်းဆုံး Video Chat Apps တွေအသုံးပြုပြီး ပြောဆိုဆက်သွယ်နေနိုင်ပါပြီ။ အစဉ်မပြတ် Team Members တွေရဲ့ Feedback ကို စောင့်ကြည့်နားထောင်နေဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ Team members တွေရဲ့ Feedback ဟာ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် သင့်ရဲ့ Personality နဲ့ Management Skill ကိုပိုလို့တောင်တိုးတက်စေပါတယ်။ Team Leader အနေဖြင့်လညး် Top Down Management လို့ခေါ်တဲ့ "ငါပြောတာလုပ် ငါလုပ်တာပဲမှန်တယ်" ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို အဓိကရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ မိမိအပေါ်ကိုယ့်ဘာသာသုံးသပ်မှုဟာ အများကသုုံးသပ်မှုထက် များသောအားဖြင့်မမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ခြားသူကထောက်ပြလိုက်လို့ ကိုယ့်အမှားကိုယ်သိမြင်နိုင်၊ အချိန်မှီ ပြင်ဆင်နိုင်လိုက်တာလည်း ကောင်ကျိုးတစ်ခုပါပဲ။ ပုံမှန် Team Activities/Outing တွေကို လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း သင်နှင့်သင်ရဲ့ Team ရင်းနှီးမှုကို အစဉ်မပြတ် တိုးမြှင့်နေရပါမယ်။ Leader အနေဖြင့်လည်း Members တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရှေ့ဆောင်ဥပမာအနေဖြင့် အမြဲတမ်းရပ်တည်နိုင်အောင် သတိရှိနေနိုင်ရပါမယ်။
Team Leader အနေဖြင့် ကိုယ့်အဖွဲ့အသင်းသားတွေရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကိုပါ လေ့လာသိရှိခြင်းသည်လည်း Management အပိုင်းမှာ ကောင်းစွာသဟဇတဖြစ်အောင် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအား နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ လက်ခံနိုင်ပြီး တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောငး် အကြံပြုလိုတဲ့ Team Members များလေ ချမှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံးလျှောက်လှမ်းနိုင်လေပါ။ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်ပြောနေဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး။ အချင်းချင်းဖေးမကူညီပြီး Team Spirit/Motivation ကိုဆွဲတင်နိုင်ရပါမယ်။ မလိုက်ချင်သူကိုလညး် ဆွဲဆောင်ပါ၊ မလိုက်နိုင်သူကိုလည်း လက်တွဲခေါ်နိုင်ရပါမယ်။ ဒီမှာတစ်ခုပြောရမှာကတော့ ဘေးကကန့်လန့်တိုက်နေသူတွေက်ို ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲထားရစ်ခဲ့ရမှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အကြံပြုချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကောင်းမှ ကောင်းမွန်တဲ့ Teamwork တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ အချိန်ပြည့်သင်ကိုယ်တိုင် Team leader ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Team Member ပဲဖြစ်ဖြစ် Team နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျရှိ မရှိဆိုတာကိုလုပ်ငန်းခွင်တစ်လျှောက်လုံး ဆန်းစစ်နေရအုံးမှာပါ။ Working Environment ဆိုတာ Second Family လို့ပြောရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့တာအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ထက် အလုပ်ချိန်ကပိုလို့တောင် များနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Happy Working Environment တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အဓိကပံ့ပိုးပေးနေသော ကောင်းမွန်တဲ့ Teamwork တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ဒီဆောင်းပါလေးကိုရေးသားလိုက်ရပါတယ်...
Crisis ကာလမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Motivated ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနေပီး ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ?
about 1 month ago by Kira Cho
​၂၀၂၁ ကာလအတွင်း IT Industry အပြောင်းအလဲများနှင့် Candidate တွေအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့် အကြံပြုချ...
about 1 month ago by Suh Nun Thang
​Avengers Organization မျိုး တကယ်ရှိနိုင်သလား?
about2months ago by Htet Naing Toe Oo
အကြပ်အတည်း ကာလများနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
2 months ago by Hsu Pyae Hnin
အလုပ်ခန့်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့်အလုပ်ခန့်စာချုပ် (Employment Contract) ရှိသင့်ပါသလဲ။
3 months ago by Hay Soe
Outsourcing Service ကို စသုံးတော့မယ်ဆိုရင် Company ကိုဘာတွေမေးပြီး ဘာတွေစဉ်းစားသင့်လဲ?
3 months ago by Hsu Yee Lin